10 katirsan Maleeshiyada Shabaab oo lagu dilay Bokool | Somali National Television - sntv.so
Home KOONFUR GALBEED 10 katirsan Maleeshiyada Shabaab oo lagu dilay Bokool
10 katirsan Maleeshiyada Shabaab oo lagu dilay Bokool
Waxaa sii kordhaya khasaarihii ka dhashey dagaal dhexmaray ciidamo taabacsan Mukhtaar Roobow Abuu-mansuur iyo maleeshiyaad katirsan kooxaha argagixisada Al-shabaab oo ka dhacay Gobolka Bokool.
Dagaalkan ayaa ka dambeeyey kadib markii ciidamada daacadda u ah Abuu-mansuur ay duulaan ku qaadeen deegaano ku dhow Abal oo hoostaga magaalada Xudur,iyagoo ka warhelay xogo la xiriira in halkaasi ay kusugan yihiin maleeshiyaad katirsan Alshabaab.
Saraakiil katirsan ciidamada Dowladda oo ku sugan Gobolka Bokool ayaa Wakaaladda SONNA u sheegay in dagaalkaasi Al-shabaab looga dilay ilaa 7 maleeshiyo ah,halka kuwo kalena ay dhaawacmeen,sidoo kale qaar oo nolosha lagu soo qabtay.
Dhanka kale waxaa la sheegay in dhanka ciidamada daacadda u ah Abuumansuur uu soo gaarey khasaare aan sidaasi u badnayd,waxaana xaaladdu ay tahay mid degan deegaankuna ay kusugan yihiin ciidamadii taabacsanaa Mukhtaar Roobow Abuumansuur.
Mukhtaar Roobow Abuu mansuur ayaa muddooyinkan waday abaabul iyo qorshayaal dagaal oo ka dhan ah Al-Shabaab, waxaana uu dhowaan tagay magaalooyinka Baydhabo, Xudur iyo Kismaayo.
Previous articleTababar lagu baranayo Hanaanka Kalluumeysiga oo laga furay Muqdisho
Next articleMas’uuliyiinta Galmudug iyo Puntland oo furay waddooyinkii xirnaa ee Gaalkacyo